အသင်းပြောင်းဖို့ သတင်းကြီးလာတဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာ ချင့်ချိန်စေဖို့ မေးခွန်းတစ်ခုထုတ်လိုက်တဲ့ ပေါလ် စခိုးလ် - SPORTS MYANMAR
အသင်းပြောင်းဖို့ သတင်းကြီးလာတဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာ ချင့်ချိန်စေဖို့ မေးခွန်းတစ်ခုထုတ်လိုက်တဲ့ ပေါလ် စခိုးလ်
ယူနိုက်တက် ဂန္တဝင် ပေါလ် စခိုးလ် ကတော့ လက်ရှိ အချိန််မှာ အသင်းမှ ထွက်ခွာဖို့ ​ကောလဟာလ သတင်းတွေ ကျယ်လောင်လာခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်လူ ပေါလ် ပေါ့ဂ်ဘာကို ဘာကြောင့် အင်္ဂလန်မှ ထွက်ခွာချင်စိတ် ဖြစ်လိမ့်မလဲ ဆိုတာ နားမလည်နိုင် ဖြစ်ရကြောင်း မေးခွန်းထုတ်ခဲ့လိုက်ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းအတွက် ဒီရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဥ်7ပွဲလုံး ကစားပေးထားခဲ့ပြီး7ကြိမ်် ဂိုးဖန်တီးပေးထားခဲ့တဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာဟာ ရာသီအကုန် အသင််းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားဖို့ ရှိနေပါတယ် ။ သူဟာ အခုထိ အသင်းနဲ့ စာချုပ် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခြင်း မရှိခဲ့သေးပါဘူး ။
ကစားသမားရဲ့ ​စွမ်းဆောင်ရည်ကို နှစ်ခြိုက်နေခဲ့သလို အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် လမ်းမခွဲလိုတဲ့ ယူနိုက်တက် အသင်းကတော့ ပြင်သစ် လက်ရွေးစင်ကို စာချုပ် သက်တမ်း တိုးမြှင့်လိုနေခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အခုထိတော့ ထူးခြားမှု မရှိခဲ့သေးပါဘူး ။
လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ သူ့ကို ခေါ်ယူဖို့ အသင်းဟောင်း ဂျူဗင်တပ်က အတက်ကြွဆုံး ဖြစ်နေခဲ့ပြီး စပိန် ထိပ်သီး ရီးယဲ မက်ဒရစ် နဲ့ ဘာစီလိုနာ ၊ လီဂူး ဝမ်း ထိပ်သီး PSG အသင်းတို့ကလည်း စောင့်ကြည့်နေကြတယ်လို့ ကောလဟာလ သတင်းတွေ ကျယ်လောင်နေခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ယူနိုက်တက် ဂန္တဝင် ပေါလ် စခိုးလ် ကတော့ အကောင််းဆုံးစုဖွဲ့မှုတွေ မပိုင်ဆိုင်ကြတော့တဲ့ စပိန်ထိပ်သီး ကလပ် ၊ PSG အသင်းတွေထက် လက်ရှိ ပရီးမီးယားလိဂ် ကသာ ကစားသမားအတွက် ပိုကောင်းတယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
” သူ ဒီကနေ ထွက်ခွာမယ့် ပုံစံမျိုး ကျွန်တော် မမြင်မိပါဘူး ။ အင်္ဂလန်မြေ ကနေ ဘာလို့ ထွက်ခွာချင် ရမှာလဲ ? ရီးယဲ မက်ဒရစ် ကို ကြည့်လိုက်ပါ ။ စပိန်လိဂ် ခေတ်က ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ ။ ရီးယဲ မက်ဒရစ် ၊ ဘာစီလိုနာ … ဒီအသင်းတွေက ကမောက်ကမ ဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားတွေ ပိုင်ဆိုင်နေကြပါပြီ ”
” PSG ကတော့ သူ့အတွက် အခြား ရွေးချယ်စရာ နေရာ တစ်ခု ဖြစ်နိုင်မှာပါ ။ ဒါပေမဲ့ ခုချိန်မှာ အင်္ဂလန်က သူ့အတွက်် အကောင်းဆုံးပါပဲ ။ ထိပ်သီး လေးသင်းကို ကြည့်လိုက်ပါ ၊ သူတို့တွေဟာ ကစားသမားကောင်းတွေ နည်းပြကောင်းတွေချည်း ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ် ။ ဒါဆို သူဘာလို့ ထွက်ခွာချင်ဦးမှာလဲ ? ”
” ဒါပေမဲ့ အခု ကိစ္စက အသင်း အပေါ်မှာပဲ မူတည်နေပါတယ် ။ အသင်းက သူ့ကို ဒီမှာပဲ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားလိုမယ်ဆိုရင် ခမ်းနားနေမှာပါ ။ အကယ်လို့ အသင်းက မထိန်းထားလိုဘူး ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး GoodBye လို့ပဲ နှုတ်ဆက်လိုက်ကြရမှာပါပဲ ” လို့ ပေါလ် စခိုးလ် က ပြောခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပြင်သစ် လက်ရွေးစင်အသင်းမှာ ခြေစွမ်းကောင်းတွေ ပြသနေခဲ့တဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာကတော့ ဒီနှစ် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းမှာ ကွင်းလယ် ခံစစ် ၊ ဘယ် တောင်ပံ တိုက်စစ် နေရာတွေမှာ ပွဲထွက် ကစားခွင့်တွေ ရရှိခဲ့ပြီး အခုထိတော့ ဂိုးတွေသွင်းယူနိုင်ဖို့ ရုန်းကန်နေရဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။